चर्चित सिरियल ‘भद्रगोल’को वास्तविक लफडा ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
चर्चित सिरियल ‘भद्रगोल’को वास्तविक लफडा !
काठमाडौं, फागुन २ । नेपाल टेलिभिनबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको हास्यव्यंग्य टेलिश्रृंखला भद्रगोल छोटो समयमै लोकप्रियातको शिखर चुम्न सफल कार्यक्रम मानिन्छ । यो श्रृंखलाका अधिकांश कलाकार अभिनयका कारण लोकप्रिय पनि भएका छन् ।
पछिल्लो समय भद्रगोलमा विवादै विवाद सुरु भएको छ । गत वर्ष जेठमा भद्रगोलको निर्माता समेत रहेका सुवास कार्की आउट भए । हाल उनी ‘के जमाना आ’ मा आबद्व छन् ।
त्यसरी नै केही महिनाअघि भद्रगोलका निर्देशक शंकर आचार्य पनि आउट भए । यसै सातादेखि आचार्यलाई पुनः भद्रगोलमा फर्काइएको छ । भद्रगोलको ‘हाइट’ बढाउने २ चर्चित पात्र भने निकालिएका छन् ।
भद्रगोलबाट जमेका कुमार कट्टेल ‘गिज्री’ र अर्जुन घिमिरे ‘पाडे’लाई गलहत्याएर यसै सातादेखि शंकर आचार्यलाई भित्र्याइएको स्रोतले जनाएको छ । कट्टेल धुर्मुसका भाई पनि हुन् ।
यसरी धुर्मुसका भाई कुमारलगायतलाई निकाल्नुको खास कारण हो, रौतहटको सन्तपुरमा धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनद्वारा निर्मित एकीर्कत बस्तीकै विषयमा केन्द्रित शृंखला निर्माण ।
धुर्मुस–सुन्तलीले निर्माण गरेको वस्तीलाई फोकस गरेर भद्रगोल टिमले भिडियो सुट गरेको थियो । भिडियोमा धुर्मुस–सुन्तलीलाई पनि देखाइएको थियो । तर, त्यो भिडियो मिडिया हब पुगेपछि धुर्मुस–सुन्तली रहेको भाग फालेर बाँकी भिडियो प्रसारण गरिएको थियो ।
धुर्मुस–सुन्तलीको भाग रहेको भिडियो काटेर फालेपछि भद्रगोल टिम नै मिडिया हबप्रति आक्रोशित बनेका थिए । यही विषय नै भद्रगोलको अहिलेको मुख्य विवाद हो ।
यस विषयमा मिडिया हबका सञ्चालक सोम धितालसँग कुरा गर्दा आफू बाहिर रहेको बेला भिडियो इडिट गर्नेहरुले फाले होला, मैले हेर्न नपाएको बताएका छन् ।
यस्तो छ कलाकार र मिडिया हबसँगको सम्झौता
भद्रगोल टिमले प्रतिशृंखला १ लाख ५ हजारमा बनाउने सम्झौता गरेका थिए । २७ भागको पैसा लिन बाँकी छ । ऋण खोजेर बनाएको भद्रगोल शृंखलाको पैसा कसरी चुक्ता गर्ने सोम धितालसँग उठाउने भन्ने चिन्तामा रुमल्लिएका छन्, कलाकार ।
कलाकारलाई पैसा नतिरेका धितालले नेपाल टेलिभिजनलाई समेत करोडौं बुझाउन बाँकी छ । नियम कानून अनुसार धिताल नेपाल टेलिभिजनको कालोसूचीमा पर्नुपर्ने व्यक्ति हुन् । तर, तिनैलाई टेलिभिजनको वार्षीकोत्सवमा सम्मान गरिएको छ ।
मिडिया हबले अभिनय गर्दै आइरहेका कलाकारहरुलाई पनि लामो समयदेखि पैसा नदिएपछि कलाकारको बेहाल छ ।
जति पनि चर्चित हास्यटेलिसिरियलहरु प्रायः मिडिया हबको उत्पादन हो । मिडिया हबका मालिक हुन् सोम धिताल । धितालले पछिल्लो समय फेरि कलाकारलाई धरधरी रुने अवस्थामा पु¥याएका छन् ।
यस्तो थियो भद्रगोलमा रहँदा कार्कीको विगत !
त्यतिबेला दर्शकको रोजाइमा परेका तिनै चर्चित कलाकारमध्ये एकमा पर्थे, सुवास कार्की ‘बेलासे’ ।
उनी श्रृंखलामा प्रयोग गर्ने थेगो ‘तनावै तनाव छ, गोजीमा दुई रुपैयाँ छैन’ का कारण चर्चित थिए । आफ्नो अभिनयले दर्शकको मत जित्न सफल बेलासे दर्शकको रोजाइमा परेपनि उनी करिब एक वर्षअघि भद्रगोलको पर्दामा देखिएका छैनन् ।
चलचित्र र टेलिश्रृंखलाहरुमा निर्माताले कलाकारलाई शोषण गर्दै हटाउने गरेका भए पनि त्यतिबेला भद्रगोलमा ठीक उल्टो दृश्य देखिएको थियो ।
रोचक के थियो भने निर्माता रहेका बेलासेलाई कलाकारहरुले नै निष्कासन गरेका हुन् । बेलासेले निर्माताका रुपमा बहन गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेपछि उनी कलाकारबाटै हटाइएका हुन् ।
उनले कलाकारलाई पारिश्रमिकबापत दिनुपर्ने महिनौंको तलब दिन आनाकानी गर्दै आइरहेका थिए । महिनौं तलब बिनै काम गरेका कलाकारले बेलासे तलब दिन सकारात्मक नभएपछि उनीबिनै सिरयल सञ्चालन गरेका थिए ।
भद्रगोलमा रहँदा उत्पादक कार्कीले मनपरी कलाकार राख्ने र अकारण निकाल्ने काम समेत गर्दै आइरहेका थिए । कार्कीको यस्तै स्वच्छाचारी रवैयाको कारण सिपी पुडासैनी ‘धतुरे’, लेखान्त भुसाललगायत केही कलाकार सिरियलबाट निस्कन परेको थियो ।
आज उनै कार्की सिपी पुडासैनीको ‘के जमाना आ’ मा आबद्व छन् । अभिनय गर्दै आइरहेका कलाकारहरुलाई क्षमताको आधारमा भन्दा पनि निकटताको आधारमा भूमिका दिने गरेको गुनासो भद्रगोलभित्र रहेको कारण कार्की सिरियलबाट ‘आउट’ हुन पुगेका हुन् ।
कार्कीले पैसा भएका मान्छेलाई क्षमता बिना नै भूमिका दिने गर्थे । ‘राम्रोलाई स्पेस नदिने र पैसा भएकालाई आवश्यकताभन्दा बढी भूमिका दिने काम बेलासेले गर्ने गर्थे ।